आखिर किन यस्तो हुन्छ निमुखालाई ? मनै भाबुक बनाउने सस्तो बजारको पीडा - Enepalese.com
आखिर किन यस्तो हुन्छ निमुखालाई ? मनै भाबुक बनाउने सस्तो बजारको पीडा
इनेप्लिज २०७४ असार १७ गते १०:३२ मा प्रकाशित
पोखराको पृथ्वीचोकमा रहेको पोखरा सस्तो बजार बन्द भएको छ । नेपाल वायु सेवा निगमको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा रहेको सस्तो बजार लामो समय देखि विवादमा थियो ।नेपाल वायु सेवा निगमले शनिबार विहान ५ बजे सस्तोबजारमा ताला लगाएको हो ।
सस्तो बजारका व्यवसायीले सस्तो बजारमा टेण्डर आतङ्क मच्चिएको आरोप लगाउदै आएका छन् भने टेण्डर पारेका सुर्य दिल ग्रुप इन्भेष्टमेण्टका युवराज खतिवडाले आफुहरुलाई टेण्डर परिसकेको अवस्थामा निर्वाध व्यवसाय संचालन गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । बेपरिले भने दलाल लाई भाडा नदिने भन्दै भाबुक स्वरमा यसो भने , हेर्नुहोस भिडियो :